September 6, 2020 - Amawpyay
ခါးနာခြင်းကို သက်သာစေမည့် အိပ်စက်နည်းပုံစံများ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ 80 ရာခိုင်နှုန်းက တစ်သက်မှာ အနည်းဆုံး တစ်ခါတော့ ခါးနာဝေဒနာကို ခံစား ရပါတယ်။ ခါးနာဝေဒနာ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အိပ်စက်တဲ့ပုံစံကို ပြောင်းလိုက်ရင် ခါးနာဝေဒနာက သက်သာသွားမှာပါ။ 1. လည်ပင်းနှင့် ကျောအပေါ်ဘက် နာကျင်ခြင်းအတွက် ပက်လက်လှန်အိပ်ခြင်းက လည်ပင်းနဲ့ ကျောအပေါ်က ဖိအားတွေကို နည်းသွားစေပါတယ်။ ကျောရိုးကိုလည်း ဖြောင့်တန်းသွားစေပါတယ်။ လည်ပင်းအောက်နဲ့ ဒူးခေါင်းအောက်မှာ ခေါင်းအုံး တစ်လုံးထားပြီး အိပ်ခြင်းက လည်ပင်းနဲ့ ကျောအပေါ် ဘက်က နာကျင်မှုကို သက်သာစေ ပါတယ်။ 2. ကျောရိုးမကြီးတစ်လျှောက် နာကျင်ခြင်းအတွက် မှောက်အိပ်ခြင်းက ကျောရိုး တစ်လျှောက်လုံး နာကျင်နေတဲ့ …
မိမိချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ ဘဝဆက်တိုင်း အတူတူဆုံလိုလျှင်
မိမိချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ ဘဝဆက်တိုင်း အတူတူဆုံလိုလျှင် ဘဝဆက်တိုင်း အတူတူဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ် ဘဝတိုင်း ဆုံချင်လျှင် အခါ တပါး၌ မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂိရိမြို့တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် နကုလပိတာ နကုလမာတာ အမည်ရှိသော သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံအိမ်သို့ ကြွတော်မူသည်၊ သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံ တို့သည် မြတ်စွာ ဘုရားအား ရိုသေစွာ ရှိခိုးလျက် သင့်လျော်သောနေရာ၌ ထိုင်နေကြပြီးလျှင် နကုလပိတာ သူကြွယ်က ဤသို့လျှောက်သည်- မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်သည် အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သော နကုလမာတာနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်၊ လက်ထပ်သည့် အချိန်ကစ၍ ယနေ့အထိ နကုလမာတာကို ကျော်လွန်ပြီး အခြားသော မိန်းမများထံ စိတ်ရောက် ဖူးသည်ဟု တခါမျှ …
မနက်ပိုင်းထက်စာရင် ညပိုင်းတွေမှာ လုပ်ရန်ပိုသင့်တော်သော အရာများ
မနက်ပိုင်းထက်စာရင် ညပိုင်းတွေမှာ လုပ်ရန်ပိုသင့်တော်သော အရာများ Scarlett O’Hara ဆိုတဲ့ ပညာရှင် ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာ အလွဲတွေကို ဒီလိုဘဲ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။ ဥပမာ မနက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးတာထက် ညနေပိုင်းမှာ ချိုးတာ ပိုသင့်တော်ကြောင်းတွေပေါ့။ မနက်ပိုင်းမှာ အစားတွေ အများကြီးစားပြီး ညပိုင်းတွေမှာ မစားဘဲနေ တတ်ကြ ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ညဘက်တွေမှာ ဗိုက်ဆာလာပြီး အိပ်မပျော် တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်လာတတ် ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း နောက်တခုကတော့ လမ်းလျှောက် တာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး မနက်ပိုင်းထက် ညနေပိုင်;တွေမှာ လမ်းလျှောက် တာဟာ ပိုပြီး သင့်တော် ပါတယ်။ စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုလဲ လျော့ကျစေနိုင်သလို ညဘက် အိပ်စက် …
အမျိုးသမီးတွေက ခင်ပွန်းအပေါ် ဘာကြောင့် မုန်းတဲ့အထိဖြစ်သွားတက်တာလဲ ???
အမျိုးသမီးတွေက ခင်ပွန်းအပေါ် ဘာကြောင့် မုန်းတဲ့အထိဖြစ်သွားတက်တာလဲ ??? လက်ထပ် ထားတာ ကြာလာတဲ့ အခါ တချို့သူတွေက အရင်အတိုင်း ချစ်မြဲ ချစ်ဆဲ ဆိုပေမယ့် တချို့တွေကျတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချစ်တွေလျော့ သွားသလို ၊ စိမ်းသွား သလိုဖြစ်တတ် ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို အခြေအနေမှာ ဒီအချက်တွေ ဖြစ်နေရင် အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ ခင်ပွန်းကို မုန်းတဲ့အထိတောင်ဖြစ် သွားတတ် ပါတယ် ။ ( ၁ ) မိသားစုအတွက်အချိန်မပေးတာ အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက် အတွက် မိသားစုက ပထမဦးစားပေး ရမယ့် အရာဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်မိသားစု ၊ ကိုယ့်ဇနီးမယားကို …
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် လိုအပ်သောကိုယ်ချင်းစာတရား ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် လျှို့ဝှက်ချက် မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ စိတ်ချမ်းသာမှုမှာ လူအချင်းချင်းပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးဟာ အချက်တစ်ချက် အနေနဲ့ ပါဝင် ပါတယ်။ မိတ်ဆိုတို့ကို ကျွန်တော်ပေး ချင်ဆုံးက စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှု စိတ်ချမ်းသာမှုပါ။ ထို့ကြောင့် သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင် ရာလေးတွေကို စဉ်းစားပြီး တင်ပြနေခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးမှာ အဓိက ကဘာလဲဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ကို မေးချင်ပါတယ်။ ဘာလို့ ထင်ပါသလဲ။ ပြောကြ တာရှိ ပါတယ် ။ စာအုပ်တွေ ထဲက အတိုင်း ပြောရရင် ပြုံးပါတို့ ချီးကျုး ပါတို့ မဝေဖန် ပါနဲ့တို့ ချောင်ပိတ် …
ရောဂါပိုးတွေ ပြန့်ပွားနေချိန် သင့်ကလေး ခုခံအားကို မြှင့်တင်ပါ။
ရောဂါပိုးတွေ ပြန့်ပွားနေချိန် သင့်ကလေး ခုခံအားကို မြှင့်တင်ပါ။ လူကြီးတွေက တစ်နှစ်လုံးနေမှ တစ်ခါ ဖျားခဲပေမယ့် ကလေးတွေ ကတော့ ခဏခဏ ဖျားတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာပါတယ် ဆိုတဲ့ ကလေးတွေတောင် တစ်နှစ်ကို ၃-၄ ခေါက် ဖျားတတ်တာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ခုလို ကိုဗစ်ကာလ မှာတော့ မေမေတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ကလေးကို နည်းနည်းလေးတောင်မှ ဖျားစေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရာသီဥတုက မိုးဦးကျ ဖြစ်လာပြီ။ ကိုဗစ်အပြင် ရာသီတုပ်ကွေး၊ သွေးလွန် တုပ်ကွေးတွေပါ ပါလာနိုင်တယ် အတွက် မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေးကို ကာကွယ်ထားသင့်ပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ကောင်းတာကြောင့် ဒီအချိန်မှာ ကလေးတွေကို …
(၇)ရက်သားသီးများအတွက် အချစ်ရေးဟောကိန်း တနင်္ဂနွေ အချစ်ရေး 💞 ချစ်ရတဲ့ သူကို အရမ်းချစ်ပေမဲ့ အနေဝေး နေကြတတ် ပါတယ်၊ ချစ်သူက အနိုင်ယူ တာမျိုး ခဏခဏ ငိုအောင် စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာမျိုး ကြုံရ တတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ချစ်သူက ဘဲ သင့်ကို သစ္စာရှိရှိနဲ့ ချစ်သွားမယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ 💞တနင်္လာ အချစ်ရေး 💞 ချစ်သူရဲ့ ချော့တာလေးကို နှစ်သက်ပေးမဲ့ ကိုယ်ကလိုက်ပြီး ချော့နေ ရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်၊ မာနကြီးတယ်၊ ရည်းစား တစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ် မထားတတ် ကျဘူး၊ ချစ်ပြီဆို တစ်ဘဝလုံးစာ၊ မုန်းပြီ ဆိုရင်လည်း သံသရာ …